हामी युवाहरुले काठमाण्डौबाटै हस्ताक्षर सन्कलन गरेर अभियानको बिधिबत उदघाटन गरेर त्यही कपुरकोटमै आउँदै छौ ।
हाम्रा नेताज्युहरुलाई यतीबेला चुनाव लागेको छ । त्यसैले यस बिषयमा डिस्टर्ब नगर्नु होला । बस आफ्नो भुमीलाई बचाउनका निम्ती तपाईंहरु सबै एक भएर आउनु होला । हामी युवाहरु पनि एक भएर आउँदै छौ । मिलनबिन्दु कपुरकोट । उदेश्य : कपुरकोट जोगाउने र सल्यान गेट बनाउने । अनी समिर्द्द सल्यानको पथमा लम्किन।
" सल्यानको सुन्दर भुमी कपुरकोटलाई जोगाऔ अभियान " अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई भद्र रुपमा कपुरकोटको समस्याका बिषयमा सरकारको ध्यानमा पार्नको निम्ती हामीले सुरुवातको चरणमा काठ्मान्डौमै रहने सल्यानीहरुबाट एक्केबद्दता र हस्ताक्षर सन्कलन गर्ने योजना बुनेका छौ । करीब १००० जती हस्ताक्षर काठमाण्डौबाट पुर्याउने लक्ष्य छ ।
त्यसपछी पुन:सल्यानमा हस्ताक्षर सन्कलन गरिने छ । श्रीनगर, खलङ्गामा २/२ दिन हस्ताक्षर सन्कलन गरिसके पछी हामी युवाहरु टोली गेट बनाउन कपुरकोटतिर आउने छौ । अनी त्यहा पुन: हस्ताक्षर अभियान चलाइने छ - एक हप्ता जती । त्यसपछी कपुरकोटबासीहरुकै रोहबरमा र सल्यानी युवाहरुको पहलमा हामीले लगभग सन्कलित ५००० एक्केबद्दता सहीतका हस्ताक्षरहरु र त्यो सँगै एउटा कपुरकोटको समस्याको भिडियो सिडीमा राखेर , कपुरकोटको समस्याका तस्बिरहरु अट्याच गरेर कपुरकोटबासिकै रोजाइका ३/४ जना ब्यक्तीहरुलाई सिंहदरबार पठाइने छ । उहाहरुले सरकारका जिम्मेवार ब्यक्तीसँगको उक्त समस्याको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हुनेछ ।
त्यसपछी गेट निर्माण कार्य पनि सँग सँगै उदघाटन भएर अघी कामहरु अघी बढ्ने छ । त्यसपछी हामीले त्यहा एउटा भुगर्ब बिदहरुको टोलीलाई स्थानिय खर्चमै बोलाएर त्यहाको समस्याका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न लगाउनेछौ । त्यसका निम्ती हामीले अहिले देखी प्रयास थालीसकेका छौ । त्यसपछी उहाहरुकै सल्लाहमा हामीहरुले कपुरकोटको पहीरो नियन्त्रणका उपायहरु अपनाएर कामहरु पनि गरेर अघी बढ्ने छौ ।
हामीले सबै कपुरकोट बासीको सहभागीतामा पहिरोले प्रभावित घरहरु पन्छ्याउने । सम्भावित पहिरो जाने पाटोतिर चेट जालीका कामहरु गर्ने , ढुङ्गा माटो थुपारेर भास्सिएको भुमीलाई समतल बनाउने । रोल्पा जाने बाटोबाट बर्खामा बग्ने पानीलाई तल बजारमा पर्न नदिएर नालीबाट बगाउनु पर्छ । यसको निम्ती नालीको सफाइ हुन जरुरी पनि छ । त्यस्तै जिल्ला प्राबिधिक कार्यलयको सहयोगमा इज्न्जियरको टोलीले पहिरोले प्रभावित कुन घर बस्न लायक छ , छैन भनेर रोडको तल्लो साइड तिरका घरहरु बर्गिक्रित गर्दिने ।
बर्खायाममै हामीहरु अभियन्ताहरु पनि त्यतै रहने सम्भावना देखिन्छ ।
हामी सँगै हुनेछौ - बर्खामा कपुरकोट बासीहरुसँग । हाइ अलर्ट बस्नु पर्छ । पहिरो रोकधामका प्रारम्भिक साधनहरु स्टेण्डबाइ गरेर राख्नु पर्छ । त्यसपछी रोल्पा जाने रोडतिर एउटा ठुलो पोलमा एउटा नाइट फ्ल्यास लाइट राख्नु पर्छ - बिशेष गरी बर्खामा । लाइन गएमा बैकल्पिक उर्जाका साम्ग्रीहरु प्रयोग गरेर भएनी त्यो लाइट बर्खाभर निभ्नु भएन । त्यसपछी यो बर्खा टरेपछी हामी पुन:हाम्रा जनप्रतिनिधीज्युह्हरु र सरकारलाई उसै गरी भद्र दबाब दिदै जानेछौ ।
हाम्रो महत्वपूर्ण भुमी कपुरकोट !
सल्यान र रोल्पाका १२ वटा गाबिसको केन्द्र !
पहिरोले क्षेती पुर्याएको स्थानका केही तस्बिरहरु हेर्नुहोस् हाम्रो महत्वपूर्ण भुमी कपुरकोटमा पहिरोले पुर्याएका समस्याहरुका तस्बिरहरु । यो लिङ्क क्लिक गर्नुहोला । https://www.facebook.com/DRdhurva/posts/1312010115531768?pnref=story
कपुरकोट बजार नेपालकै उच्च पहिरोको जोखिममा रहेको स्थान हो । यहाँका बासिन्दाहरु पहिरोको सन्त्रासमा बसिरहेका छन । यस्तो महत्वपूर्ण भुमी यतीबेला भौगोलिक संकटमा छ । यहाँको जमिन बर्सेनी डेढ देखी २ मिटरको हिसाबमा भास्सीरहेको छ । घरहरु भास्सिदा हालसम्म ५० बढी परीवारहरु बिस्तापित नै भइसकेका छन । आकाशमा कालो बादल मडारीन थालेसँगै कपुरकोटबासिको मनमा पनि बादल लाग्ने गर्दछ । अली दर्केर पानी पर्दिने हो भने यहाँका बासीन्दाहरु त्रासले रातभर निदाउन सक्दैनन । त्रासमा बस्न वाध्य हुन्छन । बर्खामा आज हो कि भोली हो भन्ने त्रासमा बस्छन स्थानियहरु । समयमै ख्याल नदिए सिङ्गो बजारको नै अस्तित्व मेटिन सक्छ ।
हामीले गर्न सक्ने भनेकै भद्र दबाब दिने हो सरकारलाई र सरोकारवालाहरुलाई । यसको निम्ती यि भिडियोहरु खोलेर हेर्दिनु हुन अनुरोध । हेरेसी चिन्तन मनन गरौ र यो भिडियो सेयर गरी सरकारको कानसम्म पुर्याइ भद्र पाराको दबाद दिन पनि आग्रह ।
भिडियो सौजन्य : निराजन खनाल
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDRdhurva%2Fposts%2F1312010115531768&width=500" width="500" height="746" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>